Dr. Tint Swe's Writings: STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ
STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ
ဒီစာကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်သင့် မတင်သင့် အကြာကြီး စဉ်းစားရပါတယ်။ ရေးထားတာ ၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ တချို့က ကျွန်တော့ ဘလော့ကနေကူယူပြီး တခြားမှာတင်နေတာတွေရှိတယ်။ စာထက် ပုံကိုအသားပေး တင်ကြတာပါတွေ့ရတယ်။ မကြိုက်ပါ။
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကိုဆေးပညာမှာ Sexually Transmitted Diseases (STDs) နဲ့ Sexually Transmitted Infections (STIs) လို့ အခုခေါ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Venereal Diseases (VD) လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလဲ အရင်က ကာလသားရောဂါ လို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနတောင် ဒီနာမယ်နဲ့ လုပ်ခဲ့သေးတာ။ ကာလသားဆိုတာ လူပျိုပေါက်ထက်ကြီးပြီး၊ များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင်လဲမကျသေးတဲ့ ယောက်ျားသားတွေကိုခေါ်တာပါ။ STDs တွေက ကာလသားတွေသာမဟုတ်ဘူး၊ အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ မွေးစကလေးတွေတောင် ကူးတာ။ ကာလသမီးအမျိုးသမီးများတွေမှာပါ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်မှာပေါ့ မဆင်ခြင်ကြလို့ တယောက်ကနေ နောက်တယောက်ကို ကူးတာကိုး။
Venereal လို့ ခေါ်တာကလဲ Venus ဗီးနပ်စ် ကနေလာတာပါ။ ကျောင်းသားတွေက သောကြာဂြိုဟ်လို့ သင်ကြရမယ်။ စာဖတ်သူများကတော့ ဗီးနပ်စ်ကို အချစ် နဲ့ အလှကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ရောမနတ်သမီးလို့ သိကြမယ်။ ရောမသာမကပါ၊ ဂရိနတ်သမီး အဖရိုဒိုက်နဲ့ပါ ဆက်စပ်မှု ရှိသေးတယ်။ လှလွန်းတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ပြတ် ကျောက်ဆစ် ရုပ်ထု Aphrodite of Milos ကို Venus de Milo လို့ ပိုသိကြတယ် မဟုတ်လား။ လှတာမက်တော့ ညစာခက် ဆိုသလို ရောဂါက အတော်ကိုကြောက်ဘို့ ကောင်းတယ်။
ဆေးတွေမပေါ်ခင်ကဆို ကုရာနတ္ထိရောဂါတွေလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ရသေးတယ်။ ဒီလိုရောဂါတွေကုဘို့ ပဌမဆုံးဆေးရုံကို ၁၇၄၆ ကျမှ လန်ဒန်မှာစဖွင့်တယ်။ စပိန်ပြည်တွင်းစစ် (၁၈၂ဝ-၂၃) ခေတ်ကတောင် ဒီရောဂါမျိုးဟာ ရန်သူ့ကျည်ဆံလို ကြောက်ဘို့ ကောင်းတယ်လို့ ပိုစတာတွေ ကပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ လိင်ဆက်ဆံရာ အသုံးပြုတဲ့နေရာမှန်သမျှမှာ ရောဂါရတယ်။ လိင်အင်္ဂါ၊ ပါးစပ်၊ စအို။ နောက်ပြီး မအေကနေ ကလေး။ မူးယစ်ဆေး သွေးပြန်ကြောထိုးနည်းတွေကနေပါ ကူးနိုင်တယ်။ လိင်အင်္ဂါတွေမှာသာမဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာတွေမှာပါ ရောဂါရတတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်တာတွေကပိုဆိုးတယ်။ Systemic STDs တကိုယ်လုံးကို ပြန့်တဲ့အဆင့်လို့ ခေါ်တာတွေက HIV, Hepatitis B (ဘီ) ပိုး၊ Hepatitis C (စီ) ပိုးနဲ့ Herpes လိင်လမ်းရေယုံတွေ ဖြစ်တယ်။
(၁) Chlamydia trachomatis ပိုးတွေကြောင့်က အဖြစ်အများဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) အဖြစ်များဆုံး STD ကို ရေးထားပါတယ်။
(၂) Gonorrhea ဂနိုရီးယားက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်။ Gonorrhea ဂနိုရောဂါ ကိုလဲရေးထားပါတယ်။
(၃) Syphilis ဆစ်ဖလစ် ကိုလဲ ရေးထားပါတယ်။
(၄) Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံ ကိုလဲ ရေးထားပါတယ်။ ရေယုံဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်တာတမျိုး၊ ပါးစပ်တဝှိုက် ဖြစ်တာတမျိုး။ လိင်လမ်းမှာလဲ ဖြစ်သေးတယ်။ (HSV-2) ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်တာ။ အရည်ကြည်ဖုတွေ ဖြစ်တယ်၊ နာတယ်၊ ယားတယ်။ မွေးလာမယ့် ကလေးကိုကူးနိုင်တယ်။
(၅) ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ (၃) မျိုးထဲမှာ(ဂါ့ဒ်နီရဲလား ဗဂျိုင်နိုက်တစ်)နဲ့ (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်) တွေက လိင်နည်းနဲ့မဆိုင်ဘဲ ဖြစ်ပေမဲ့ (ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) ကတော့ လိင်ကနေကူးစက်တယ်။
(၆) Chancroid ရှန်ကာ ဆိုတာဖြစ်ရင် လိင်အင်္ဂါမှာအနာ၊ အကြိတ် ပေါ်လာမယ်။ ပေါင်ခြံကအကြိတ်တွေ ရောင်လာတယ်။
(၇) LymphogranulomaVenereum (LGV) ဆိုတာက တက်စေ့တွေ ရောင်တာပါ။ လိင်အင်္ဂါမယ် မနာတဲ့အနာဖြစ်လို့ ဆစ်ဖလစ်နဲ့ မှားတတ်တယ်။
(၈) Genital Warts (1) လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ (၁) နဲ့ Genital Warts (2) လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ (၂) တွေကိုလဲ ရေးထားပါတယ်။
Human Papillomavirus (HPV) လိင်လမ်းကြောင်း ကြွက်နို့ကနေတချိန်မှာသားအိမ်ဝကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
(၉) အသည်းရောင် (ဘီ) ကိုတော့ အများကြီးရေးထားပါတယ်။
(၁ဝ) HIV/AIDS ကို အများကြီးရေးထားပါတယ်။
ဒီလိုကူးစက်ရောဂါတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Pubic Lice သန်း။ Parasites ပါရာဆိုက် ခေါ်တယ်။ ဆီးစပ်မွှေးမှာလဲ ဆံပင်တွေမှာလို သန်းတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ပုံစံမတူတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Crabs ခေါ်တယ်။ ယားမယ်။ ဥတွေအုချတယ်။ ပွါးမယ်။ ကူးမယ်။ Scabies ဝဲ (ယားနာ)။ Mite ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ STD ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ယားမယ်။ နီရဲလာမယ်။ ကူးမယ်။ Ring worm ပွေး။ တခြားနေရာကပွေးလဲ ဆီးစပ်နေရာတဝှိုက်မှာ ဖြစ်နေရင် တယောက်ကနေတယောက် ကူးမယ်။
Pelvic Inflammatory Disease (PID) တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း။ လိင်ကတဆင့်ကူးတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ အသေအခြာဆေးမကုရင် အမျိုးမီးမှာကလေးမရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာနေမယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ဆက်ဆံရင် နာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ ကြားရက် သွေးဆင်းမယ်။လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဆက်ဖြစ်၊ ထပ်ဖြစ်ရာကနေ အတွင်းအင်္ဂါတွေ (သားအိမ်ဝ၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်၊ မျိုးဥအိမ်နဲ့ အတီးအတားကနေရာတွေ) ရောင်တာ ဖြစ်တယ်။ Chlamydia နဲ့ Gonorrhea ကနေလဲဖြစ်စေတယ်။ ဆီးစပ်နေရာနာမယ်။ တခုခုဆင်းမယ်။ Pelvic Inflammatory Disease (PID) အမျိုးသမီးတင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း ကိုရေးထားပါတယ်။
STDs ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ လိင်မဆက်ဆံဘဲနေပါလို့ပြောတာ အမှန်ဆုံးဘဲ။ လက်တွေ့မကျလို့ အကြံကောင်း ပေးတာကို လိုက်နာပါ။ အဖေါ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပါ။ ဆေးစစ်ကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမြဲသုံးပါ။ လက္စဏာရှိရင် မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် ဆေးကုပါ။
(ကွန်ဒွမ်) ကနေအကုန်လုံးကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) ကနေ Gonorrhea, Chlamydia, HIV နဲ့ Trichomoniasis တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်တယ်။ Herpes, Syphilis နဲ့ Genital warts တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း မကာကွယ်နိုင်ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) မဖုံးတာကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ Crabs နဲ့ Scabies တွေကို လုံးဝ မကာကွယ်နိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် အထူးသတိထားပါ။ စောမွေးတာ-ပျက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထဲကကလေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။ အသေမွေးနိုင်တယ်။ အလေးချိန်မပြည့်ကလေးမွေးနိုင်တယ်။ ကလေးမှာမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနိုင်တယ်။
အများစုရောဂါတွေက တခါဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါပြီးသွားသလို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ Gonorrhea, Syphilis, Chlamydia နဲ့ Trichomoniasis တွေကို ဆေးကုရင် ရှိနေတာတွေ ကောင်းသွားမယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်ရင် နောက်တခါ ဆေးထပ်ကုရလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကဆေးကုပေမဲ့ အဖေါ်ကဆေးမကုရင် ပြန်ကူးလာမယ်။
- Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-itching.htm
- Vaginal itching မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vulvovaginitis.html
- Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-itching.html
- Chlamydia (ကယ်လ်မီဒီးယား) အဖြစ်များဆုံး STD http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/chlamydia-std.html
- STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stds-basic.html
Unknown July 26, 2015 at 4:07 AM
hpone mg mg August 1, 2015 at 12:56 PM
ရှန်​ကာ ဖြစ်​ရင်​ ဘာ​ဆေးနဲ့ကုသနိုင်​ပါသလဲဆရာ
hpone mg mg August 1, 2015 at 12:58 PM
Std ဆိုတာ ဘယ်​လိုလဲ?​ရောဂါ လက္ခဏာ ကဘာ​တွေလဲ?
နှမ်းဖတ်ချဉ်စာရေးတော့ နှမ်းဖတ်နဲ့ ပဲဖတ်ကို ခွဲခြားပြောကြတယ်။ အရင်တင်စဉ်ကလည်း အဲလိုကွန်မင့်တွေလာပါတယ်။ အရောင်မတူတာကို ထောက်ပြကြတယ်။ ဆီးကြ...
► 2019 (2984)
ပိဋကတ်သုံးပုံပါ မြန်မာစာ (၂)
World's most threatening superbugs ranked in new l...
Life expectancy to break 90 barrier by 2030
ပိဋကတ်သုံးပုံပါ မြန်မာစာ (၁)
Brain Tumor ဦးနှောက်အကျိတ်
Seven ways the world could change
Cytotec (Misoprostol) ဆေးသုံးနည်း
Rapid weight gain for baby ကလေးရုတ်တရက် အလေးချိန်တ...
Top 20 Poorest Countries in Asia အာရှ အဆင်းရဲဆုံးတ...
Deadliest Dictators အာဏာရှင်ဆိုးကြီးများ
Avian Influenza A (H7N9) Virus ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး
Gua Sha မက်ကလောင်
Samples ညပိုင်းမှာလာ နမူနာ
Kim Jong-nam killing ကင်-ဂျုံ-နမ်း ဘေဘီ-အွိုင်လ်း ...
Daily Alms ဆွမ်းတော်ဗျို့
Peasants Day တောင်သူလယ်သမားနေ့သမိုင်း
Common Opposites တူညီသော ဆန့်ကျင်ဖက်များ
Civics ပေါ်လက်တအစ စစ်ဗစ်က
Virtuous Tradition ယဉ်ကျေးမှု
Surgery and Language ခွဲစိတ်ပညာ မြန်မာစာ
HCG Levels in Pregnancy ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ သွေးစစ်ခြ...
Ovulation and Pregnancy tests မျိုးဥစမ်းနည်းနှင့် ...
Earth-sized Worlds ကမ္ဘာလောက်ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်ခုနစ်ခုတေ...
OG and OB
Cancer Tests ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း လမ်းညွှန်သစ်
ပန်းထိမ် နှင့် ပန်းတိမ်
Berlin Wall မြန်မာပြည်က ဘာလင်တံတိုင်း
ကွန်ရက် နှင့် ငရုတ်
Facebook မှာ လေဖြတ်တာ
Whom to Blame ထမင်းရေပူ
My First Post of the Day ကနေ့တွက်တာ ပဌမဆုံးစာ
Eating from the Same Plate လက်ရေတပြင်တည်း
Potato chips အာလူးချစ်ပ်
Be deliberate အလွယ်နဲ့ အခက်
Incisional Hernia ခွဲစိတ်နာ ဟာနီယာ
Causes of Infant Mortality တနှစ်အောက်ကလေးသေဆုံးရခြ...
Hypothesis အော်ဂဲနစ် သနပ်ခါး
Dandy-Walker Syndrome ဒင်ဒီ-ဝေါ်လကာ ဆင်ဒရုမ်း
Rhyme for Health အစားအစာ လင်္ကာ
The Tree အပင်အို
Mr. President မ နှစ်လုံးဆင့်
Carfentanyl ဆင်ဖြူတော် မူးယစ်ဆေး
Multi-level-marketing မာလ်တီလယ်ဗယ် တံလျှပ်
Japanese encephalitis (JE) ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂ...
Mucous cyst လျှာအောက်ကအိတ်
Warning မြန်မာပြည်ကကုန်ပစ္စည်းများ အမေရိကမှာ သတိပေး...
Baby Delivery Lesson ကလေး ဖွားခြင်း အကျဉ်း
Mosquito Smile ခြင်ဆေးက ရီရတယ်
Save Our Language ကယ်တော်မူပါ မြန်မာစာ
Chalk dust and Health မြေဖြူနဲ့ ကျန်းမာရေး
Whiteboard Markers ဝှိုက်ဘုတ် မတ်ကာ
My Book အသည်းရောဂါစာများ
Nanbya ဖတ်ကောင်းတဲ့ နံပြား
Trump's national security adviser quits
Valentine’s Day Word Search ဗယ်လင်တိုင်း ကျောင်းသင...
International Condom Day နိုင်ငံတကာ ကွန်ဒွမ်နေ့
Male Infertility ကလေးမရခြင်းမှာ ခင်ပွန်းဖက်ကအားနည်...
Subserosal Fibroids သားအိမ်အလုံးတမျိုး
Shame on you! ကျွန်ုပ်အား စာမေးပွဲစစ်ကြသူများ
Eating well may count more than exercise for weigh...
(၇ဝ) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား
Union Day 2017
Fertility မျိုးပွါးခြင်း မေးခွန်း
Thyroperoxidase (TPO) စစ်ဆေးခြင်း
Please No Politics နိုင်ငံရေးအလိုမရှိသူနဲ့တွေ့ရခြင...
Herpes IgG Test ရေယုံစစ်ခြင်း
Natural numbers ဂဏန်းရေးနည်း
Oh, People အို ပြည်သူတွေ
Common method of cooking rice can leave traces of ...
Life is fun ဘဝဆိုတာ ရီစရာလည်းပါ
Utmost Respect ဘုရားစင်
► 2016 (2245)
► 2015 (2287)